I-Easter Brain Teaser: Ngaba ungayibona iqanda elifihliweyo? - Ukuphefumlelwa Kwepasika
I-Easter Brain Teaser: Ngaba ungayibona iqanda elifihliweyo?
Iveki yebhanki yePasika yeveki yeveki ilapha, kutheni ungabhiyozeli ixesha kunye nepuzzle yokugoba ingqondo?
Ukuze usasaze uvuyo oluncinci, iqela kwiiNdwangu eziDumileyo lifihle iqanda elincinci eliluhlaza ngaphakathi kolunye lwezona zinto zithengiswayo kakhulu-kwaye kuthatha umntu ophakathi imizuzu esixhenxe kunye nemizuzwana engama-26 ukuyifumana.
Ifakwe ngaphakathi kwe-eucalyptus yeziqu zoyilo lweSanta Maria, eli laphu liyinxalenye yokuqokelelwa kweNdawo yeTropiki yaseMalibu. Kwimibala e-cheery etyheli, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye netial, yeyona nto iphambili intwasahlobo shicilela.
'Ephethe imibala yasentwasahlobo eyakhayo kunye noyilo oluphefumlelweyo lwamagqabi, iMalibu yenye yezona ngqokelela zethu zithengiswa kakhulu, utshilo uNicola Brumfitt, umlawuli wentengiso Impahla eyaziwayo . Ngexesha nje lika-Epreli, besicinga ukuba siza kucela umngeni kwiintsapho ekuzingeleni amaqanda ngePasika kwaye simeme wonke umntu ukuba azimanye naye kulonwabo. Khange siyiqonde indlela ekunzima ngayo ukuyifumana! '
Kutheni unganiki ingqondo yakho ukuzilolonga kwaye uye ngezantsi.
Ngaba kunzima ukufumana iqanda? Jonga impendulo engezantsi ...
Uyilo lwebhafu lokuhlambela ezincinci
Ngaba uyayithanda le nqaku? Bhalisa kwincwadana yethu ukufumana amanqaku angaphezulu ngolu hlobo kusiwa ngqo kwi-inbox.
Uyayithanda le nto uyifundayo? Yonwabele Iphephancwadi i-House Beautiful zisiwe ngqo emnyango wakho inyanga nenyanga ngokuhanjiswa simahla kwe-UK. Thenga ngqo kumshicileli ngexabiso eliphantsi kwaye ungaphoswa ngumba!
24 Izimvo zesipho se-Ista zilungele lonke usapho
Iintambo ezintle zePasika zokuthenga ngoku
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda ngezantsi kwe-18 imihombiso yePasika yokuqaqambisa ikhaya lakho
Inyathelo ngenyathelo: I-Easter yeentyatyambo zangaphambili zokubonisa umnyango
Ivenkile yeH & M yasekhaya ingqokelela yePasika 24 izimvo ezithandekayo zesipho sePasika
Kuphi ukuthenga umthi wePasika Vavanya ingqondo yakho ngolu lonwabo lobuchwephesha bePasika
Amaqanda amatsha angabonakaliyo eDeliveroo ayaqhekeka
Ikea ithengisa ipakethi ethe tyaba yetshokholethi
Vavanya ingqondo yakho ngolu lonwabo lobuchwephesha bePasika
Ngaba uyayibona i-elf boot ifihle kule phazili inobuqhophololo?
Ngaba uyayibona i-elf ifihle kule phazili inkohliso?
Ngaba uyabubona ubumnandi obufihliweyo kule ndawo ikhephu?
Ngaba lo mzobo wokuzingela iqanda kunzima ukuqhekeka?
Ngaba ngawona maqanda e-Ista adla ukutya amaqanda kwihlabathi?
Izimvo zokulala kwigumbi eliphezulu
Ukuhombisa udonga imibono yegumbi lokulala
umela ntoni umthi